बाहिरियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिवार को कल रेकर्ड! नसोचेको अवस्था अगाडी आउँदा सबै चकित। (भिडियो हेर्नुहोस) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/बाहिरियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिवार को कल रेकर्ड! नसोचेको अवस्था अगाडी आउँदा सबै चकित। (भिडियो हेर्नुहोस)
44,704 1 minute read